ညိမ်းညို: ရင်ချင်းဆက်ဘာသာဗေဒ (၀ါ) ကဗျာ
Posted by ညိမ်းညို at 02:53
ဒီထက်မက ကဗျာကောင်းတွေ ဆက်လက်ရေးဖွဲ့နိုင်ပါစေနော် :)
3 December 2008 at 03:12
ဖတ်ရတာမ၀ဘူးဗျာ***အဲဒီဆရာကဗျာတွေဆိုရင် တစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းကို ထပ်ခါထပ်ခါဖတ်ရတယ်**
ခုလိုတင်ပေးတာ ဝေမျှပေးတာ ကျေးဇူးပါဘိုညိမ်းရေ**
ကျေးဇူးဗျာ ဘိုညိမ်း***ကဗျာများကို ဆက်လက်ပြီး ရေးသားနိုင်ပါစေဗျာ***ဒါနဲ့ လွင်ပြင်ရောက်တော့မယ်**ခရောဆွဲဖို့ ခါးတောင်းကြိုက်ထားတော့**ကျနော်ရောက်လာတော့မယ်**
ရာစုနှစ် ၁ ခုပဲစောင့်**အိုကေလား ဘိုညိမ်း***
ကဗျာစာအုပ်လေးတွေ မျှဝေပေးလို့ ကျေးဇူး။ အကုန်လုံးကို တဖြည်းဖြည်းချင်း ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ဦးမယ်။
အားမနာတမ်းပြောရရင် ကဗျာစာအုပ် အကုန်လုံးကိုလိုချင်တယ်ဗျာ..:P upload လုပ်ပြီးတဲ့ links လေးတွေ share လိုက်ပါဦးဗျာ... အရမ်းကျေးဇူးတင်နေပါပြီ.
မနည်းပါလား အစ်ကိုရ ။ လွန်တယ်ဗျာ ။ အစ်ကိုဆီရောက်မှပဲ ခွေရိုက်တော့မယ် ။ အခုလောလော
ဆယ်တော့ ဒါလေးတွေ အပ်လုပ် လုပ်ပေးပါဦး ။ ကျေးဇူး
ဘိုင်ရှိုးရီး .. :D
၆၈။ ဝေမှူးသွင်-သစ်ရွက်တို့၏ ပေါ့ဆခြင်းများ
khine- ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ :) :)
သီဟညိမ်း- ဘိုစိုင်းရေ မစောင့်နိုင်ဘူးဗျ ဟားဟား
ကောင်းကင်ကို- ဟုတ်ကဲ့ဗျ မေးကနေ ညီပို့ပေးမယ် အကိုရချင်တဲ့ စာအုပ်စာရင်လေးထားပေး :)
စိုင်းလောဝ်ပိန်း- ရတယ်ဗျာ ဘာမှအားနာစရာမလိုဘူးရယ် :)
မောင်ငယ်- ရပါတယ်ညီလေးရေ ညီး ဇာ့ ရှသာ :) အဲဒီစာအုပ်တွေ အတ်လုပ်တင်ပီး လင့်တွဲပေးထားလိုက်မယ်
ကဗျာကောင်းတွေ အများကြီး ဆက်လက်ရေးဖွဲ့နိုင်တဲ့ ကလောင်ထက်တဲ့ ကဗျာဆရာကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်ပါစေ ခေတ်သစ် နတ်သျှင်နောင်လေးရေ :)
ကဗျာဆို သိပ်မသိလို့ကိုချီးရွန်း ကဗျာတွေ ဆွဲသွားတယ် အစ်ကို ကျေးဇူးးးး
ကိုညိမ်းညိုရေ ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဗျာ ကျွန်တော် လည်း အစ်ကိုတင်ပေးတဲ့ အထဲက မောင်ချောနွယ် ကဗျာတွေဒေါင်းလုပ်ဆွဲသွာဖူးတယ်ဗျာ အဲဒီထဲက ကျေးဇူးတင်စကားပြောမလို့ဟာ အခုမှပြောခွင့်ကြုံတော့တယ် ကိုညိုမ်းညို ခင်မင်လေးစားစွာဖြင့်
ကောင်းလိုက်တဲ့ collections ပဲ ကိုညိမ်းညိုရာ..
နောက်နောင် ဘာပဲရရ မျှပါဦး..
ကဗျာစာအုပ်တွေကို ပြောတာပါဗျာ. တလွဲတွေးမနေနဲ့ဦး..
ကျေးဇူးညီ. အပင်ပန်းခံ စုဆောင်းပေးထားလို့။ နောက်ကို အလွယ်တကူ ပြန်ရှာလို့ရတာပေါ့။ :)
Please give me "Sayar Zawgyi's Poems".
my mail is zarsoe@gmail.com
ကဗျာစာအုပ်စာရင်းတွေရတာ အထူးဝမ်းသာမိတယ်။ အဆင်ပြေမယ်ဆို စိုင်းဝင်းမြင့်ရဲ့ ကဗျာ စာအုပ်နှစ်အုပ် internet.casper@gmail.com ကို ပို့ ပေးလို့ရနိုင်မလား။ ဒါမှ မဟုတ် ဒီမှာ Upload လင့်ပေးလည်းရပါတယ်။ ဒီစာအုပ်နှစ်အုပ်လို့လိုက်ရှာနေတာကြာပြီ၊ ဘယ်နေရာမှ ရှာလို့ မတွေ့ ဘူးဖြစ်နေခဲ့တာ။ တောင်းရတာ အားလည်းနာတယ်။ အဆင်ပြေသလို လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်။
​ကျေးဇူးပြုပြီးကဗျာစာအုပ်​​လေးတစ်​အုပ်​​လောက်​ e-mail က​နေပို့​ပေးပါဆရာ။စာအုပ်​နာမည်​က ရင်​ဖွင့်​စကားချစ်​သူကြား​စေ လို့​ခေါ်ပါတယ်​။ကျွန်​​တော့်​e-mailက​ pymyosixt@gmail.com ပါဆရာ။​​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​ဆရာ..
21 March 2014 at 22:54